Izixhobo zedayimani, izixhobo zokuguba ze-PCD, izixhobo zokucoca i-PCD-uMhlaba
Izixhobo zeJiangxi Earth Superhard zizixhobo zedayimani ezisemgangathweni zaseTshayina esazibophelela kwiimveliso zethu kulwakhiwo nakwimveliso yamatye amashumi eminyaka. Imigca yethu ibandakanya izixhobo zokusila / zokucoca zeDAYD kunye nePCD, iiDiamond Saw Blades, i-Core Drill, i-Floor Grinders, i-Resin Pads zonke zisetyenziswa kakhulu ekucoceni ikhonkrithi, kulungiso lomhlaba kunye nokubona ukusika kunye namabala e-Stone Fabrication.
Umqolo omnye Cup Ukusila Wheel JD1-1-5
Umqolo omnye Cup Ukusila Wheel JD1-1-4
Umqolo omnye Cup Ukusila Wheel JD1-1-3
Umqolo kabini Cup Ukusila Wheel JD1-1-2
Umlinganiso wekhredithi kumaxabiso aphezulu kunye neemveliso ezininzi
Ngomhla we-08, 2021
Ukusila komgangatho kubhekisa kunyango lokusila lwekhonkrithi / ilitye / iterrazzo / i-epoxy yomhlaba
Ukusila komgangatho kubhekisa kunyango lokusila lwekhonkrithi / ilitye / iterrazzo / epoxy yomhlaba, ethi ipolishe kakuhle iterrazzo, umphezulu wesamente, umaleko wodaka we-epoxy kunye nomhlaba omdala we-epoxy, njlnje ngoku ndisebenzise umzi-mveliso ngqo weHTC Diamond Ukugaya izihlangu zekhonkrithi kunye neTerrazzo Umgangatho wokuqala ...
Ukusukela nge-5 kaFebruwari ukuya kwi-20, siza kubhiyozela umnyhadala wasentwasahlobo ngeli xesha lokugqibela. Uxolo ngayo nayiphi na inconveninet kuwe kwaye nceda ukhululeke ukunxibelelana nam ukuba une-somethign engxamisekileyo ukufumana impendulo ...
I-2020 Umnyhadala weNtwasahlobo abathengi abathandekayo, Ukusukela nge-5 ukuya ku-20 ka-Februwari, siza kubhiyozela umthendeleko wasentwasahlobo ngeli xesha lokugqibela. Uxolo ngayo yonke into nge-inconveninet kuwe kwaye nceda ukhululeke ukunxibelelana nam ukuba une-somethign engxamisekileyo ukufumana impendulo. Ndingathanda ukuthatha eli thuba ndinqwenelele wena kunye ...